कांग्रेस महाविधेशन : देउवा र पौडेल सभापतिमा पुन: भिड्ने ! रणनीति बनाउँदै र उम्मेद्वार छान्दै दुबै समूह - केन्द्र खबर
कांग्रेस महाविधेशन : देउवा र पौडेल सभापतिमा पुन: भिड्ने ! रणनीति बनाउँदै र उम्मेद्वार छान्दै दुबै समूह
नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाविधेशन हुन अब दुई दिन बाँकी छ । महाधिवेशनको समय नजिकिएसंगै पार्टीमा संस्थापन पक्ष (देउवा समूह) र संस्थापन इतर पक्ष (पौडेल समूह) आफ्नो तर्फका उम्मेद्वार छान्न र राणनीति बनाउन व्यस्त छन् ।
संस्थापन पक्षबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधी सभापति आकांक्षी छन् । तर, सभापति देउवा नै सभापतिमा उठ्नेगरी अगाडि बढिसकेका छन् । संस्थापन इतर पक्षबाट चार जना आकांक्षी छन् ।
वरिष्ट नेता रामचन्द्र पक्षबाट स्वयम वरिष्ट नेता पौडेल, महामन्त्री सशांक कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता शेखर कोइराला आकांक्षी छन् । आकांक्षी मध्य महामन्त्री सशांक कोइरालाले सभापतिमा वरिष्ट नेता पौडेललाई समर्थन दिइसकेका छन् भने, प्रकाशमान र शेखरले मुख खोलेका छैनन् ।
संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउवा नै सभापतिमा उठ्ने भएपछि संस्थापन इतर पक्षबाट सभापतिमा साझा उम्मेद्वारको रुपमा वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेललाई नै अगाडि सार्ने मनस्थितमा अन्य नेताहरु पुगिसकेको सो समूहका एक नेताले केन्द्रखबरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सशांक कोइरालाले सभापतिमा पौडेललाई समर्थन गरेपछि बाँकी दुई नेतालाई पनि दबाब भएको छ ।
दिउँसो सम्ममा वरिष्ट नेता सभापतिमा उठ्ने निर्णय हुने र त्यो सार्वज्निक हुने ति नेताको दाबी छ । उनको दाबी अनुसार पौडेल सभापति उम्मेद्वार बने १३ औं महाधिवेशनमा झै पुन शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल नै सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रने छन् ।
१३ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई समेत यसपाली सभापति देउवाले आफ्नो टिममा समावेश गर्ने निस्चित भइसकेको सभापति देउवा निकट एक नेताले जानकारी दिए । ‘सिटौलालाई हामै्र टिममा सहभागि गराएर टिम बनाउँदै छौं’ ति नेताले केन्द्रखबरसंग भने ।
रणनीति बनाउँदै दुबै समूह
सभापति शेरबहादुर देउवाले आसन्न १४औँ महाधिवेशनका विषयमा आफूनिकट नेताहरूसित छलफल गर्दै छन् । त्यसका लागि देउवाले बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा आफूनिकट नेताहरूलाई बोलाएका छन् ।
छलफलपछि पदाधिकारीसहितका उमदेवारको टुंगो लगाउने तयारी रहेको बताइएको छ । विभिन्न पदमा आकांक्षी धेरै हुँदा देउवालाई आफ्नो टिम तयार गर्न सकस परेको छ । जिल्ला र प्रदेशहरुमा प्राप्त नतिजाले उत्साहित देखिएको देउवा समूह सुष्मढंगले त्यसलाई पनि केलाएर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा छ ।
याता संस्थापन इतर पौडेल समूहले पनि आजै शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर साझा उमेदवार तय गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि मंगलबार नेता प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आज बेलुकासम्म साझा उमेदवार तोक्ने बताएका थिए ।
बैठकमा नेता पौडेलले आउँदो चुनावसम्म मात्रै पार्टी चलाउन दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि आफू कार्यवाहक दिन तयार भएको तथा अहिले नै सहमति गर्न पनि तयार रहेको बताएका थिए । छलफलपछि सभापतिका आकांक्षी तथा महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाले आफूले रामचन्द्र पौडेलका लागि बताई सकेका छन् ।
विभिन्न जिल्लामा संस्थापन इतर समूहबाट धेरै उम्मेद्वार उठ्दा नेतृत्व गुमाउनु परेको भन्दै सो समूहका नेताहरुले सहमतिमै सभापति र पदाधिकारी हुँदै कार्यसमिति सदस्यसम्म टुंग्यान दबाब बढेको छ ।
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन यही मंसिर २४(२६ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने तय छ ।